काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक अर्ब ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ निक्षेपका रुपमा राख्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएका बेला राष्ट्र बैंकले राख्ने यो रकमले उनीहरुलाई सहयोग पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद......
घट्यो सुनको मुल्य, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं – सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । तेजाबी सुन ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी तोलामा ८ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार तोलामा ७१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको......
काठमाडौं – सिद्धार्थ बैंकको १८ औं वार्षिक साधारणसभाले बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख ४ हजार ५ सय ४० रुपैयाँको १० प्रतिशत बराबरको ८८ करोड ८७ लाख ६० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ बोनस सेयर तथा १५.२६ प्रतिशत बराबरको १ अर्ब ३५ करोड ६५ लाख २९ हजार १ सय १४ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रदान गर्ने लगायतका प्रस्ताव पारित......
काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २१ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। त्रिविको बजेटभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको हो।महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा २१ अर्ब बेरुजु देखिएपछि त्रिविले १ सय ३१वटै एकाइमा आन्तरिक लेखा परीक्षण शुरू गरेको छ। त्रिविले हालसम्म पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण क्याम्पस र एकाइ तथा......
दशैँ सकिए लगत्तै घट्यो सुनको मुल्य
काठमाडौं – नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मुल्य घटेको छ। आज प्रति तोला १ सय रुपैयाँले घटेर छापावाल सुन प्रति तोला ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसै गरि तेजावी सुनको मूल्य ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार......
एक बैङ्कको एटीएम अर्को बैङ्कमा चल्न थाल्यो
काठमाडौँ – ह्याकरले नेप्सको सिस्टम नै ह्याक गरी विभिन्न बैङ्कको रकम चोरेपछि बन्द रहेको अन्तर बैङ्क एटीएम सेवा शुरु भएको छ । दसैँ तिहारलाई मध्य नजर गर्दै अन्तर बैङ्क एटीएम खुला भएको हो । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टममा १८ बैक आबद्ध छन् । यी सबै बैङ्कको एक बैङ्कको एटीएम अर्को बैङ्कमा चल्न थालेको छ......
नेपालीको घरायसी खर्च दसैंमा नगद आठ खर्ब
काठमाडौँ – सरकारी तथ्यांक भन्छ– गत वर्ष सबै नेपालीको घरायसी खर्च २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । यसपालि झण्डै २४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । दसैं यस्तो चाड हो– जसमा वर्षभरिको खर्चको एक तिहाइ सकिन्छ । त्यस आधारमा यो दसैंमा ८ खर्ब रुपैयाँ सकिँदैछ । तर, त्यसको ४० प्रतिशत नगद ननिकाले पनि हुन्छ । जस्तो–आफ्नै......
राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट साट्न थाल्यो, एक जनाले कतिसम्म पाउँछ नयाँ नोट ?
काठमाडौं – आगामी आइतबार घटस्थापनाको दिनबाट सुरु हुने दसैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण (सटही) थालनी गरेको छ । शुक्रबार बिहानैदेखि नयाँ नोट लिन जानेहरूलाई र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नयाँ नोट वितरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा......
सोमबार सुनको मुल्य घट्यो कि बढ्यो ?
काठमाडौँ – सोमबार सुन तोलामा ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार पनि यहि मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यता, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ८ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले......
काठमाडौँ – चितवनका कुखुरापलक किसान, सप्लायर्य तथा बिक्रेताहरुको भेलाले अण्डाको मूल्य ३० रुपैयाँले बढाएको बढाएको छ । व्यवसायमा घाटा बढ्न थालेको भन्दै उत्पादकबाट मूल्य वृद्धिको माग बढेको थियो । २२० प्रतिक्रेट रहेको ठूलो अण्डाको मूल्य बढाउर २५० पुर्याइएको नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक संघका......